काठमाडौं । नेकपाकी सांसद नविना लामाको नेतृत्वमा गएको काभ्रे क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधि सभाका सांसद गंगाबहादुर लामाव नध्ब, तथा काभ्रे क्षेत्र नं १ प्रदेशसभा सांसद रत्न ढकाल सहितको टोली काभ्रेका गुण्डाका रुपमा चिनिएका सत्यमान लामालाई छुटाउन आएको कुरा सुनेपछि एसएसपी धिरजप्रताप सिंहले नकारिदिएका छन् । सांसद नविनाले म प्रधानमन्त्रीले पठाएर आएको समेत भनेपछि धिरजले मलाई जानकारी छैन भन्ने ठाडो जवाफ दिएका थिए ।
आइजीपी सर्वेन्द्र खनालले प्रहरीको ढाडमा हाड छ भन्ने देखाउने जुन प्रयास गरेका छन्, त्यो प्रशंसनीय मान्नैपर्छ, क्यावात् धीरज । सत्यमान गतहप्ता मंगलवार पक्राउ परेका थिए, अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले
बताएको छ । प्रहरीले असामाजिक तत्वहरुलाई उन्मुक्तिदिन कसैले पनि अनावश्यक दबाब दिन नहुने भनेर आग्रह गरेको छ । सत्तारुढ दलकै सांसदहरु यसरी अपराधी छुटाउन गएका समाचार प्रधानमन्त्रीले पढेकै होलान्, प्रहरी रिपोर्ट पनि आएकै होला । सुशासन ल्याउँछु भन्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलका सांसदलाई कावुमा राख्न नसकेकै हो त ? नेकपाकालाई भ्रष्टाचार गर्न, अपराधिकरणमा छुट दिएकै हो त ?
विधिको शासनमा मात्र सुशासन हुन्छ । बिधिमिच्ने छुट अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले किन आफ्ना पार्टीका नेताहरुलाई दिइरहेका छन् ? त्यसमाथि सत्यमान ज्यानमार्ने धम्की दिएको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् । यति गम्भीर मामिलामा पनि प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न नदिने ? एसएसपी ठिक कि सांसद, प्रधानमन्त्री छुट्याउ । आइन्दा यस्तो गल्ती काम गर्ने पार्टीका नेताहरुलाई खबरदार गर्नु उचित हुनेछ ।